9 abesifazane abadumile ukuthandana nalo abesifazane
Kubonise isithakazelo akuyona wobulili obuhlukile akuyona into engavamile. Ungakwazi ukumangala noma ukushaqeka neze umuntu uma ukwamukela ukuthi ungungqingili noma bi. Yiqiniso, akulula neze esikhathini esidlule, kodwa kubonakala sengathi ezihamba nekusasa elingcono kwamukeleke kangconywana. Asikhumbule, noma ufunde ezinye izimo abadumile lapho osaziwayo besifazane ukuthandana nalo abesifazane.
Akusiyo imfihlo ukuthi u-Angelina Jolie bekulokhu intsha ngempela entsha. Lapho wathuthela ngayohlala nesoka lakhe, eseneminyaka engu-16 kuphela, kuyilapho iningi lamantombazane aneminyaka yobudala ephindwa ayeseqala nje ukuhlangana guys. Futhi wayenenkinga ezinye zezidakamizwa, kukhathazeka ongaziwa ngemimese igazi, futhi esikhathini esithile wayeze bahlangana intombazane. Phakathi ukuqopha Foxfire, lokhu kwaba emuva ngo-1990, u-Angelina wathandana uzakwabo endaweni sokudubula Dzhenni Shimitsu. Yanika okuthandayo nabantu, kodwa owazi, mhlawumbe ngemva kokuhlukanisa ne Brad futhi isifuna okuthile okungavamile.
Zonke ozithandayo American TV impi Ellen DeGeneres wayengomunye walaba osaziwayo kuqala Hollywood owakhuluma obala bexoxa uthando lwakhe abesifazane. Wachitha iminyaka engu-12 e ubuhlobo nomlingani wakhe okuthiwa Portia de Rossi, 8 zazo bashada ngempela.
Nakuba Kristen ngaphambili wahlangana namadoda kanye ubuhlobo bakhe Robert Pattinson wakwenza konke abalandeli we Saga "Twilight" ujabule kakhulu, kuba - womunye wabesifazane odumile kakhulu namuhla abangekho qakala abesifazane. Wahlangana nge singers ezifana Soko futhi St. Vincent, futhi manje kubonakala ubuhlobo esijulile no-Alicia Kargayl. Kristen akawuthandi ukwabelana ezimpilweni zabo siqu nomphakathi futhi kuyaqabukela uphendula imibuzo mayelana, kodwa kusobala ukuthi izintokazi ezimbili ukuchitha isikhathi esiningi ndawonye.
Njengoba wazi by Cynthia indima egqamile futhi ezithakazelisayo "Ucansi City" chungechunge. ubuhlobo bakhe owesifazane lo wayengumGreki nhlobo, ngoba iminyaka engu-15 indoda yakhe wayengenaye nendoda, futhi bazele izingane ezivame (indodana nendodakazi). Kodwa ngokushesha nje lapho ethola wahlangana uChristine Marinoni, ngokushesha sathandana. Basuke emshadweni kusukela 2012, futhi baze babe nomntwana ngokuhlanganyela okuthiwa uMax Ellington Nixon-Marinoni.
Kara, cishe - imodeli edume kunazo zonke, othanda abesifazane. Yena lo oculayo St Vincent kwaba ngempela "enomsindo" Ubuhlobo. Kwabonakala sengathi lo mbhangqwana ephelele, abantu nje wadala ukuba ndawonye, kodwa esikhathini esithile banquma ukuhamba, ngoba nje akazange abe nesikhathi nomunye ngenxa esimatasa. Kodwa le ntombazane ayikwazanga isikhathi eside ukuba kude komunye nomunye, futhi futhi uqaliswe kabusha ubuhlobo bawo. Kusukela ngaleso sikhathi, kukhona amahemuhemu ukuthi sebeshadile, wabe esehlukanisa. Kunzima ukusho ngokuthe ngqó. Kodwa singaqiniseka ukuthi lapho bendawonye, sibona pair omkhulu.
Umlingisikazi Mishel Rodriges asisebenzi labo bantu abaku- nezwe lonke ememeza mayelana baziphatha. Akakaze wayigcina kuye imininingwane yokuphila kwakhe siqu imfihlo. Amahlebezi nezindaba amanoveli akhe nabesifazane Kwadlula izikhathi eziningi, kodwa nje ngibe nomuzwa isidingo sokukhuluma ngakho futhi wenze lokhu umbukiso. Nokho, ngokushesha nje lapho ulwazi Kwadlula mayelana ubuhlobo baso Cara Cara Delevingne, waphuthuma yamemezela ukuthi ngithanda abesilisa nabesifazane.
Sonke khumbula Dzhodi Foster e ifilimu "Ukuthula we Amawundlu." Jody awuzange washada kuze 2014, kodwa akuzange kubavimbe yakhe kabili ukuba abe umama. Cindezela njalo ecabanga ukuma kwakhe ngokobulili, kodwa kuze 2007, uJody wagcina ukuphila kwakhe siqu luyimfihlo. Nokho, ngo-2007-ke ekugcineni livulekile, uthe nokuba nobuhlobo Sidney Bernard. Kamuva, bahlakazeka, futhi Jody wahlangana nabanye abantu besifazane, kodwa ngokushesha yathola uthando bakhe beqiniso. Futhi kwaba Alexandra Hedison, lapho ngo-2014 ukuze bagunyaze ubudlelwane.
Ngemva kokuhlukanisa yamuva kusuka Dzhonni Deppom Amber wabuyela endaweni yesehlakalo okuthiwa Me, futhi bangaki abantu bathi uzama yena ubudlelwano abesifazane. Nalapha futhi, lesi akusona isimanga wonke umuntu. Amber kwaba nokuba nobuhlobo photographer Tasya van ree iminyaka 5 ngaphambi kokuba ashade Depp. Kunzima ukusho okuthile ocacile ngalokhu umuntu odumile nokunye othandekayo. Kodwa kukhona amahemuhemu ukuthi unesithakazelo Kara Delevin. Ubani wayengeke abe nesithakazelo kuwo, akunjalo? Kungenzeka uye waphawula ukuthi le ntombazane zithandwa kakhulu ngomqondo othile?
Miley muva wathi empeleni ngithanda abesilisa nabesifazane, okusho ukuthi phansi akanandaba naye. Yena owayo uthandana indoda, ubuntu bakhe. Futhi ungubani - ukuthi owesilisa noma owesifazane - ngokuphelele asihlobene. Wahlangana nge Liam Hemsworth, kodwa wayebuye nokuba nobuhlobo imodeli Stelloy Maksvell bese ayelapho amahemuhemu ukuthi yena Liam babehlela lomshado. Kwazi bani lokutawulandzela. Miley uhlale egcwele lezimanga. Nazi udumo ongaqondakali futhi ngaphezu kokuvamile, futhi sikwazi kuphela ukugcina ukuphila kwabo siqu kanye nempumelelo professional.
Kunyatheliswa Uilyam - indlalifa yesihlalo sobukhosi British
Biathlete Liv-uGrete Puare: Biography, empilweni yakho futhi impumelelo
Illusionist British Steven Frayne: Biography. Sigxile Steven Frayn
Rokko Richi: Yini esiyaziyo ngaye?
Kristina Romanova (imodeli): Biography, ubude nesisindo, empilweni yakho
Simon Pegg: Filmography, Starring. Simon Pegg no-Nick Frost: Filmography
Cambodia Maka incazelo nokubaluleka
Isikhala ebhange: indlela yokwenza yezandla yasekuqaleni
Scraper elihambayo: Umgomo we operation, izinhlobo, injongo kanye nezici
Amakhandlela atsilakt, imfundo manual.
Kanjani ukuqonda abesifazane imizwa yabo? Yini abesifazane abafuna ukusuka indoda?
I ukuzala iyahluka kwenye asexual. zizalela Izici
Rhinitis: Izimpawu kanye Treatment abadala, izinhlobo rhinitis, kubangela yesifo
"Smecta" izidakamizwa. Yokusetshenziswa
Kanjani ukufundisa ingane ukukhasa ezinamaphiko ezihamba ngazo zozine? Funda indlela yokukwenza ndawonye naye
"Zadonshchina": ngonyaka wendalo. izincwadi zasendulo Russian we XIV - xv eminyaka
Udweba kanjani ikhampasi ngezigaba